Vaovao - Tombony ho an'ny valizy
(1) ny firafitry ny valvelobe eran-tany dia tsotra kokoa noho ny vavahady vavahady, ary mety kokoa ny fanamboarana sy ny fikojakojana.
(2) ny mora famehezana dia tsy mora ny mitafy sy manotra, tsara famehezana, misokatra sy manidy eo anelanelan'ny valizy valizy sy ny vatan'ny vatan-kase tsy misy mikorisa, noho izany ny akanjo sy ny fikororohana dia tsy matotra, fampisehoana famehezana tsara, androm-piainana lava.
(3) rehefa manokatra sy mikatona dia kely ny kapoka kapila, ka kely kokoa noho ny vavahady vavahady ny haavon'ny valva-bolan'ny vavahady, fa ny halavan'ny firafiny kosa lava noho ny vavahady vavahady.
(4) lehibe ny tora-pisokafana sy ny famaranana, miasa mafy ny famohana sy ny famaranana, ny fotoam-panokafana sy ny famaranana no lehibe.
(5) lehibe ny fanoherana ny tsiranoka, satria mampijaly ny fantsona antonony ao amin'ny vatan'ny valizy, lehibe ny fanoherana ny tsiranoka ary lehibe ny fandaniana herinaratra.
(6) raha ny tsindry nomen'ny anarana Pn amin'ny làlan'ny fivezivezena dia ambany na mitovy amin'ny 16Mpa, amin'ny ankapobeny dia midina izy io, ary ny medium dia mivoaka avy amin'ny lalana ambany amin'ny kapila valva; Tsindry nomanina Pn ≥ 20Mpa, amin'ny ankapobeny mampiasa countercurrent, antonony mikoriana avy amin'ny làlan'ny kapila. Mba hampitomboana ny fahaizan'ny famehezana. Rehefa ampiasaina dia afaka mivezivezy amin'ny lalana iray ihany ny mpanelanelana manapaka ary tsy afaka manova ny làlan'ny mikoriana.
(7) rehefa nosokafana tanteraka dia matetika erotra ilay kapila.
Ny axis an'ny vatan'ny valve an'ny valveloba dia mitohy amin'ny famehezana ny seza valizy. Ny lozam-pifamoivoizana misokatra / akaiky dia somary fohy ary tena azo antoka ny fanapahana fanapahana, mahatonga ity valizy ity ho azo ampiasaina amin'ny fanapahana na fanaraha-maso ary fampiasana throttling.